Maung Luu Way – လေဘာရုံး ဘာလဲ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဘယ်လဲ? – MoeMaKa Burmese News & Media
Maung Luu Way – လေဘာရုံး ဘာလဲ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဘယ်လဲ?
မောင်လူဝေး၊ မေ ၃၀၊ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်တွင်းက အထည်ချုပ်စက်ရုံတချို့ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်သင့်တင့်တဲ့ အဆင်ပြေမှု ထွက်ပေါက်တခုကို ရှာဖွေလိုက်နိုင်ကြလို့ အဆင်ပြေသွားကြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလေးတွေကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာအနှံ့ရောက်မြန်မာများအားလုံး စိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကလည်း အမှန်ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ တခြားသောစက်ရုံအလုပ်ရုံမှ အလုပ်သမားအလုပ်ရှင် ပြဿနာများကတော့ ပြေလည်တော့ မလိုလိုနဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတခုဆီကို တွန်းပို့နေသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း စိတ်ထဲမှာ ဦးဆုံးသတိရလိုက်တာကတော့ အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ဆိုသူနှင့် ပြည်သူအများ နားလည်ခေါ်ဝေါ်နေသော လေဘာရုံး ခေါ် အလုပ်သမားရေးရုံး တို့ကိုလည်း မျက်လုံးထဲမှာ ထင်းကနဲလင်းကနဲ မြင်နေမိပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အလုပ်သမားလုပ်ခ လစာနဲ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှု့ ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေမှုတွေနဲ့အတူ မှော်ဘီဖက်မှာရှိနေတဲ့ သံမဏိစက်ရုံ မှာဆန္ဒပြနေတဲ့အလုပ်သမားများကတော့ အမြင့်ဆုံးအရှိန်တခုဖြစ်တဲ့ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ အခြေအနေတခုကိုဘ၀နဲ့ရင်း၊ အသက်နဲ့ရင်းပြီး အလုပ်သမားတချို့ကတော့ ( သေတမ်းစာ )ကို ကြိုတင်ရေးသားထားကြောင်းကိုလည်း ကြားသိမြင်တွေ့နေရပါတယ်။
အစိုးရအနေဖြင့်လည်း လုံးဝကို လစ်လျှုရှု ပြီး မနေသင့်တော့တဲ့ အခြေအနေတခုလို့လည်း နားလည်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများတောင်းဆိုနေသော လုပ်ခ လစာတိုးမြင့်ပေးရေးဆိုတဲ့ အခြေခံလစာဟာ နိုင်ငံတကာမဆိုထားနဲ့ဦး၊ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံက နိုင်ငံသား ထိုင်းလူမျိုးအလုပ်သမားတဦး ၀င်ငွေမပြောနဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတဦးရဲ့ တနေ့ဝင်ငွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တောင် အဆ နှစ်ဆယ်ကျော်လောက် ကွာဟလို့ နေပါတယ်။
ကျနော် အခုလို နှိုင်းယှဉ်ပြတာက နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတဦး လုပ်ခလစာအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဧည့်နိုင်ငံခြားသား ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတဦးရဲ့ တနေ့လုပ်ခ၀င်ငွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံသားစစ်စစ် တွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဌာနေအလုပ်သမားတွေရတဲ့ တနေ့ဝင်ငွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဌာနေထိုင်းလူမျိုး အလုပ်သမားဖြစ်ဖြစ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဌာနေ မလေးနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတဦးဖြစ်ဖြစ်ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားသား ဧည့်အလုပ်သမားတဦးထက် အဆပေါင်းများစွာ ၀င်ငွေအရသော်၎င်း၊ အလုပ်သမားခံစားခွင့်များကိုသော်၎င်း ရရှိပါတယ်။
တဖန် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံသား ဌာနေအလုပ်သမားတွေ တနေ့ရတဲ့ ၀င်ငွေကတော့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရပ်ခြား ဧည့်အလုပ်သမားများရဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အဆပေါင်း နှစ်ဆယ် (၂၀) ကွာဟနေပြီး မလေးရှားနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားသားဧည့်အလုပ်သမားတဦး တနေ့ဝင်ငွေဖြင့် ထပ်မံနှိုင်းယှဉ်ပြရပါလျှင် အောက်ခြေ အနည်းဆုံးဖြင့် တွက်ချက်ရပါမူ အဆပေါင်း လေးဆယ် (၄၀) ကျော် ကွာဟလွန်းနေပြန်ပါတယ်။
ဒါဟာ တနေ့ချင်းရဲ့ လုပ်ခ၀င်ငွေ နှိုင်းယှဉ်မှုပါ။
အမှန်နှိုင်းယှဉ်ပြ ရမှာက နိုင်ငံသား ဌာနေအလုပ်သမားတဦးချင်း တနေ့ဝင်ငွေကို နှိုင်းယှဉ်ရ မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုယှဉ်ပြမှု့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားဝင်ငွေနဲ့ ရွေ့ပြောင်း ဧည့်နိုင်ငံသားတဦး ၀င်ငွေနှိုင်းယှဉ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျနော်တွက်ပြတဲ့ တနေ့ဝင်ငွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံသား ဌာနေအလုပ်သမားတဦးဝင်ငွေနဲ့သော်၎င်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မလေးနိုင်ငံသား ဌာနေအလုပ်သမားတဦးဝင်ငွေနဲ့သော်၎င်း၊ တွက်ချက်ပြချင်းမဟုတ်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ဧည့်နိုင်ငံသား အထွေထွေအလုပ်သမားတဦးရဲ့ တနေ့လုပ်ခ၀င်ငွေအရ သော်၎င်း၊ မလေးရှားရှိ
ဧည့်နိုင်ငံသား အထွေထွေအလုပ်သမားတဦး၏ တနေ့လုပ်ခ ၀င်ငွေအရသော်၎င်း၊ အနိမ့်ဆုံး ပေးစကေးဖြင့် တွက်ချက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ကျနော်တွက်ချက်ပြခြင်းသည် over time ခေါ် အချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းခ မပါဝင်ပါ။ အခြေခံ တနေ့အလုပ်ချိန် ၈ နာရီသာလျှင် တွက်ချက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတဦး၏ ၀င်ငွေ ဖြင့် တွက်ချက်ပြရပါမူ မတွေးဝံ့အောင်ပင်ဖြစ်ရပါသောကြောင့် ဒီနေရာမှာ ကျနော်မတွက်ပြတော့ပါ။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်တွင် နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတဦး၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနိမ့်ကျလွန်းနေပြီး၊ တနေ့လုပ်ခ ၀င်ငွေသည်ပင်လျှင် မည်သည့်နိုင်ငံမှ အလုပ်သမားတဦး၏ တနေ့လုပ်ခ ၀င်ငွေနှင့်မျှ နှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင် အလွန်အမင်း နိမ့်ကျနေခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံမှ အလုပ်သမားထုကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို လက်ရှိ အရပ်သားအစိုးရ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟု တွင်တွင်ပြောဆိုနေသော သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့သော်၎င်း၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် အနေနဲ့သော်၎င်း၊ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားရေးရုံးဟု ခေါ်သော အများအခေါ် လေဘာရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတို့သည်၎င်း ထိထိရောက်ရောက်ဖြင့် မိမိနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများဖက်မှ မားမားရပ်တည်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးရန် အခုအချိန်သည် အချိန်ကောင်း အခါကောင်းဟုသာ ဆိုရချေတော့မည်။
ယခုကဲ့သို့ အချိန်ကောင်းအခါကောင်းအား လက်လွတ်မခံပဲ မိမိနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများဖက်မှ ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါက အလုပ်သမားဝန်ကြီးသော်၎င်း၊ အလုပ်သမားရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတို့အား၎င်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားထုကြီး၏ ယုံကြည်မှု့များ၊ လေးစားမှု့များ၊ အားကိုးမှု့များကို မုချရမည်မှာ မလွဲပေ။ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ဂုဏ်သိက္ခာသည်လည်း များစွာ တက်လာပေတော့မည်။
သို့သော် လက်တွေ့တွင်မူ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်သည် ဘယ်မှာလဲ?
ဟု တည့်တည့်ကြီး မေးရမည့်အခြေအနေသို့ ရောက်နေ၏။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အလုပ်သမားဦးစီးဌာန များကိုလည်း ဘာလဲ?
တစတစနှင့် ရက်ကြာလာသောအခါ ထိုအလုပ်ရှင်ဖက်မှသော်၎င်း၊ လုပ်ခလစာတိုးမြင့်ရေး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေကြသော အလုပ်သမားထုကြီးဖက်မှ သော်၎င်း နှစ်ဖက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှု့များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဤသို့သော်အခြေအနေတွင် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကြား အလုပ်သမားရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတို့သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာနှင့်သော်၎င်း၊ အနည်းဆုံး ဧည့်နိုင်ငံခြားသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာနဲ့သော်၎င်း၊ နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ပြီး အလုပ်သမားများဖက်မှ တောင်းဆိုပေးရန်သာ ဖြစ်တော့သည်။
အနိမ့်ဆုံးလက်ရှိအခြေအနေကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါက အလုပ်သမားဝန်ကြီးဆိုသူသည် ဘာအတွက်၊ ဘယ်အလုပ်သမားအတွက် ၀န်ကြီးဖြစ်နေသည်ကို မေးခွန်းထုတ်ရန်သာ ရှိတော့သည်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဆိုသူနှင့် အလုပ်သမားရေးရုံးခေါ် လေဘာရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတို့သည် လူပွဲစား ပြည်တွင်းအေးဂျင့်များအား မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်လူရွယ်များ၊ ပညာတတ်များအား သူများနိုင်ငံသို့ “ကျွန်” သဖွယ် တင်ပို့စေလွှတ်နိုင်ရန် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးရုံသက်သက်လား?
သို့တည်းမဟုတ် အေးဂျင့်များမှ တနှစ်လျှင် နိုင်ငံခြားသို့ လူ ဘယ်နှစ်ယောက် လွှတ်ပေးနိုင်ရမည်၊ အလုပ်သမားတဦးပြည်ပသို့ ” ကျွန် ” သဘောနှယ် လွှတ်ပေးလိုက်နိုင်ပါက အလုပ်သမားရေးရုံးသို့ US $ ဒေါ်လာ ဘယ်နှစ်ရာပေးရမည် ဆိုသည့် အမိန့်နှင့် လူခွန်ကောက်သည့်သဘောမျိုး ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပေးရန်သက်သက်လား?
လူပွဲစားအေးဂျင့်များကို ခေတ်သစ် လူကုန်ကူးနိုင်ရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ချပေးရုံ သက်သက်လား?
အလုပ်သမားရေးရုံး ခေါ် လေဘာရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၀န်ထမ်းများ အားလုံးတို့သည် မိမိတို့ဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်သည် ဘာလဲ ? ဆိုသည့်အချက်လောက်ကိုတော့ သိထားဖို့ ကောင်းလေသည်။
အလုပ်သမားရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ပါ စကားလုံးများအရ ထိုညွန်ကြားမှု့ဆိုသည့် စကားလုံးသည် အလုပ်သမားများအား အလုပ်ရှင်ပေးသလောက် လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်လုပ်ဖို့ ညွန်ကြားမှာလား?
သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များဖက်က ထားရာနေ စေရာသွား ခိုင်းတာလုပ် ခံမပြောနဲ့ဟူသော ညွန်ကြားမှုများကို ညွန်ကြား နေမှာလား?
ဆိုသည့် မေးခွန်း ထုတ်စရာတွေ တသီတတန်းကြီး ဖြစ်နေပေတော့သည်။
အကယ်၍ မှော်ဘီရှိ သံမဏိစက်ရုံမှ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေကြသော အလုပ်သမားများဖက်မှ တစုံတဦးသော်၎င်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှု့ဖြစ်ခဲ့သည် ဆိုပါစို့ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိသနည်း?
လက်ရှိ အရပ်သားအစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ဟု တွင်တွင်ပြောဆိုနေသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တွင် တာဝန်ရှိသလား? ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသလား?
တာဝန်ရှိသဖြင့် တာဝန်ယူသည်ဆိုပါမူ မည်သို့ တာဝန်ယူမည်လဲ?
အလုပ်သမား လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေသော ပြသာနာအား ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သည့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တွင် တာဝန်ရှိသလား?
ထို အလုပ်သမားဝန်ကြီးကရော တာဝန်ယူမည်လား?
သို့မဟုတ် အလုပ်သမားရေးရုံးမှ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည့် ညွန်ချုပ်၊ ညွန်မှုး ဆိုသူများတွင် တာဝန်ရှိသလား? ၄င်းအဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကရော တာဝန်ယူမည်လား?
အတ္တ၀ါဒ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဘယ်သူသေသေ ငါမသေရင်ပြီးရော ဆိုသည့် နိုင်ငံခြားသား တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွင် တာဝန်ရှိသလား? ထို နိုင်ငံခြားသား တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ကရော တာဝန်ယူမည်လား ?
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစစအရာရာ လိုက်မမှီအောင် တက်နေသော ကုန်ဈေးနှုန်းများနှင့် ပကတိ အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာနှင့် လုံးဝ မလောက်တော့သဖြင့် မခံနိုင်လွန်း၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်တင်ပြတောင်းဆိုနေသော အလုပ်သမားများအားလုံးသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် ကြည့်ကြည့်၊ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများရှိ အလုပ်သမားဥပဒေနှင့်ပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်၊ အလုပ်သမားများ ယခုတောင်းဆိုနေသော လုပ်ခလစာတိုးမြင့်ရေးနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးပေးရေးတို့သည် လွန်စွာမှ တရားသောနည်းလမ်း၊ အလွန်တရာ ရိုးသား သမာသမတ်ကျသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်လေတော့သည်။
သုိ့ပါသောကြောင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဆိုသူသည်၎င်း၊ အလုပ်သမားရေးရုံးခေါ် လေဘာရုံးမှ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသည်ဆိုသူများသည်၎င်း၊ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုနေသော လုပ်ခလစာတိုးမြင့်ရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ပေးရေး စသည့် တောင်းဆိုချက်များကို အချိန်မီအမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးရန် တာဝန်အပြည့်အ၀ရှိပါကြောင်နှင့် အကယ်၍ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြသော ဖြူစင်ရိုးသားသည့် အလုပ်သမားများထဲမှ တစုံတဦးသောသူသည် အသက်ဆုံးရှုံးမှု့ဖြစ်ပေါ်လာသည် ဆိုပါက လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်အောက်ရှိ အလုပ်သမားဝန်ကြီးနှင့် အလုပ်သမားရေးရုံးမှ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူတို့တွင်သာ တာဝန်အပြည့်အ၀ ရှိပါကြောင်း ထပ်လောင်း၍ သတိပေးရင်းဖြင့် ထပ်မံတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
( မှတ်ချက်) ထပ်မံပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သော အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်သမားများကို မည်ကဲ့သို့ ခေါင်းပုံဖြတ်သည်၊ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်သည်ကို ထပ်မံတင်ပြပေးပါဦးမည်။
← Beruma – ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ဈေးလည်း ပါတယ်
Nyein Chan Aye – အမုန်းကြီးသူ သို့ →
မောင်မောင်စိုး ● ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသား အရေး ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၁)
December 29, 2016 Aung Htet
သားကြီးမောင်ဇေယျ – ဒေါ်နယ်ထရန့်ရယ်၊ ဟယ်လာရီ ကလင်တန်ရယ် ကျနော်တို့ရယ်
တူမောင်ညို – နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (တစ်ယောက်မကျန်) အားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ လွတ်မြောက်ရေး
3 thoughts on “Maung Luu Way – လေဘာရုံး ဘာလဲ နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဘယ်လဲ?”
အလုပ်သမားဝန်ကြီး မင်းဗထူး စာအရေးအသားမှာ အလွန်ကောင်း သလို အလုပ်သမားအေ၇းလည်း အလွန်မကောင်းရင်နေပါ သင်.တင်.ယုံ လေးတော. ၀င်ေ၇ာက်ဖြေရှင်းပေးသင်.ပါတယ်။
သွားရောက်တိုင်တန်းဘူးပါတယ်၊ ကျွန်မပြောတာကိုနားထောင်ပြီး.ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်..ဘာမှ မကူညီ
ပါဘူး။ အလုပ်သမားရုံးဟာ အလုပ်ရှင်နိုင်ငံခြားသားဖက်ကပဲရပ်တည်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေကိုပဲတွေ့မြင်
သမားများဖက်ကရပ်တည်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးတာဘာတခုမှ မရှိခဲ့ပါဘူး.. မောင်လူဝေးရှင့်..
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအကြောင်းနှင့်အလုပ်သမားရေးရုံးက ခြစားမှု့ ..လာဒ်ယူပြီးအလုပ်သမားတွေကိုဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေကိုဆက်လက်ေ၇းသားပေးပါရန်တိုက်တွန်း
i would like to remind you about election chairman of Mr.Tin Aye (General Tin Aye). Now he is screwing about this labour striking..